Cockapoo-ka: Ma yahay eeyga kugu habboon adiga? - Taranka
Cockapoo-ka: Ma yahay eeyga kugu habboon adiga?
Cockapoo waa caan caan ah Poodle (ama Doodle) oo loo jecel yahay dabeecad saaxiibtinimo iyo qalafsan, muuqaal qurux badan.
Waxay noqon karaan dayactir sare , dadka qaarna way ka quustaan ​​baahiyahooda awgood. Laakiin aqoonta saxda ah ee ku saabsan korintooda, waad hubi kartaa inaad siiso saaxiibkaa dhogorta leh nolol dheer oo farxad leh.
Akhriso si aad waxbadan uga ogaatid Doodlekan xiisaha badan oo aad kubilowdo barashada sida si sax ah loogu daryeelo Cockapoo!
Tilmaamaha jirka ee Cockapoo ah
Waa maxay dabeecadda Cockapoo?
Sida loo daryeelo Cockapoo
Arrimaha caafimaadka ee aad Cockapoo ku yeelan karto
Noocyada sida Cockapoo
Xagee ka iibsan karaa Cockapoo?
Cockapoo ma yahay eeyga kugu habboon adiga?
Sidoo kale loo yaqaan Cockapoodle, Cockadoodle, ama Spoodle, Cockapoo waa farac ka mid ah a Ciyaaraha Poodle iyo a Cocker Spaniel .
Sida mid ka mid ah eeyaha naqshadeeyeyaasha ugu da'da weyn, isweydaarsigan ayaa ka jiray Mareykanka tan iyo 1950-yadii.
Isku darka 'Cocker Spaniel-Poodle' ayaa loo kariyay si gaar ah a eey adag oo hooseysa leh dabeecad wanaagsan. Bixiyeyaasha ayaan diiradda saarin sameynta eey qurux badan; halkii, waxay mudnaanta siiyeen caafimaadka eeyga iyo shakhsiyadda.
Iyada oo Cocker Spaniels ay leeyihiin macaan, shakhsiyad dib-u-dhac ah iyo Poodles oo dadka u janjeedha, soo jiidashada Cockapoodle runti waa jecel yihiin.
Ciyaaraha Fudud ee Ciyaaraha
Waxaa loo soo saaray sida eeyaha ugaarsiga, Poodles waxaa markii hore loo isticmaali jiray in lagu dhuuqo qashinka waaweyn ee keymaha isla markaana dib loogu soo celiyo shimbiraha milkiilayaashooda.
Sababtoo ah timahooda qurxinta badanaa, waxay bixiyaan an isla weynaan ama snobbish vibe, oo u eg sida eeyaha buuqsan ee u baahan daaweyn gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, jarista dhogorta Poodle ayaa dhab ahaantii loogu talagalay in lagu caawiyo eeyga inuu dhaqso u dhaqaaqo oo uu ka ilaaliyo xubnihiisa gudaha qabowga biyaha.
Marka laga reebo timahooda indhaha soo jiita, Poodles ayaa caan ku ah iyaga sirdoonka iyo hammi ay ka qabaan inay ka farxiyaan milkiilayaashooda. Iyagu waa 2aad eyda ugu caqliga badan adduunka , sidaa darteed tababarkoodu waa neecaw.
Poodles sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada ugu saaxiibtinimada wanaagsan, iyada oo ay ugu wacan tahay asalkooda asxaabtii ugaadhsiga. Kuwa ay ugaadhsasho laadadka hareeraha xayawaanka yaryar sida bisadaha iyo shimbiraha, in kastoo.
Xitaa-xanaaq, Cocker Spaniel kalgacal leh
Ereyga ‘Cocker Spaniel’ wuxuu u jeedin karaa laba nooc oo kala duwan: the Isbaanish Mareykan ah iyo Ingiriis Cocker Spaniel . Labadooda waxaa loo tixgeliyey inay yihiin hal nooc illaa qarnigii 20aad.
Hadday yihiin Mareykan ama Ingiriis, eeyahaas waxaa loo abuuri jiray inay noqdaan asxaabta ugaadhsade sidoo kale. Cocker Spaniels ayaa si sax ah loogu magacaabay sidaas maxaa yeelay waxay caan ku yihiin ugaarsiga looxaanta.
Ingiriis Cocker Spaniel
Eeyadan ayaa caan ku ah shakhsiyaddooda dabacsan. Xaqiiqdii, AKC-da heerka caadiga ah waayo Cocker Spaniel-ka Mareykanka wuxuu sheegayaa in eeyga ugu fiican ee taranka waa inuu ahaadaa ' bilaash iyo farxad '.
Noocyada kala duwan ee Mareykanka ayaa si gaar ah loo aqoonsan karaa, sidoo kale, dhagihiisa dhaadheer ee dhaadheer iyo kuwa indhaha wareega.
Ciyaar iyo baashaal-jecel , Cocker Spaniels iyo Poodles ayaa jecel inay waqti la qaataan qoysaskooda, iyagoo ka dhigaya eeyahaasi kuwa ugu fiican ee rabaayadda ah. Shakhsiyadooda saaxiibtinimada leh ayaa sidoo kale iyaga ka dhigta xulasho weyn oo loogu talagalay milkiileyaasha eyda markii ugu horreysay.
Sifooyinkaasi aakhirkii waxay noqdeen kuwa lagu arkay Cockapoos.
Ma loo yaqaan 'Cockapoos' naadiyada waaweyn ee aqallada?
Sababtoo ah waa nooc isweydaarsi ah, Spoodle si rasmi ah looma aqoonsan naadiyo waaweyn eey sida American Kennel Club iyo United Kennel Club.
Si kastaba ha noqotee, kuwa fara badan ayaa ujeedkoodu yahay inay ku guuleystaan ​​xaalad saafi ah oo loogu talagalay iskudhafkan iyada oo loo marayo taranka taranka badan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira seddex naadi oo jira oo loogu talagalay iskudhafyadan kuwaasina waa:
Naadiga Cockapoo ee Ameerika (1999)
CCA waxay isku dayeysaa inay abuurto oo dhiirrigeliso heerarka taranka ee isdaba jooga ah iyada oo loo marayo taranka dhaqamada kala duwan (adigoo u isticmaalaya laba Cockapoodles waalid ahaan) halkii laga abuuri lahaa jiilka koowaad Cockapoos (Spoodles leh Poodles iyo Cocker Spaniels waalid ahaan).
Waxay rumeysan yihiin in taranka taranka badan uu gacan ka geysan doono abuuritaanka Cockadoodle leh astaamaha joogtada ah oo waxay keeneysaa eeyo 'u dhasha run' (erey macnaheedu yahay faracku wuxuu yeelan doonaa astaamo la saadaalin karo, sida eyda saafi ah).
Naadiga Cockapoo ee Mareykanka (2004)
Naadigan ma sameeyo taranka noocyo badan. Taabadalkeed, waxay dhaleen jiilka koowaad Spoodles iyagoo adeegsanaya Poodles iyo Cocker Spaniel oo dhaafa heerarka noocyada AKC iyo CKC.
Diiwaangelinta Waqooyiga Ameerika ee Cockapoo (1999)
NACR waxay diiradda saareysaa kor u qaadista iyo ka dhigista Cockapoo nooc ujeedo leh oo la isticmaali karo.
Qeyb ka mid ah ololahooda, waxay bixiyaan shahaado loogu talagalay Cockadoodles oo ah alaabooyinka ugu horreeya illaa iyo jiilka lixaad.
Cockapoo buuxa ayaa soo geli kara cabirro kala duwan , inta badan waxay kuxirantahay cabirka Poodle waalid kaas oo loo adeegsaday taranka.
Teacup iyo Toy Cockapoos waa kuwa ugu yar farabadan. Noocyada kala duwan ee Teacup in ka yar 6 rodol (2.7 kg) oo istaaga in ka yar 10 inji (25 cm) oo dherer ah, halka Toy Cockapoo uu yahay kudhowaad 10 inji (25.4 cm) dherer iyo miisaan ka yar 12 rodol (5 kg).
Coacadoodles Teacup waxay u muuqdaan inay ka muruq badan yihiin Waxyaabaha lagu ciyaaro.
Poodle oo yar yar oo waalid ah, Coature Cockapoo ayaa culeyskiisu yahay 13 illaa 18 rodol (5 ilaa 8 kg) waana caadi 11 ilaa 14 inji (27 ilaa 35 cm) dheer.
Cockapoo yar yar ( xigasho )
Noocyada ugu waaweyn ayaa ah Heerka ama Maxi Cockapoo, oo laga soosaaray istaandarka caadiga ah. Nooca Heerka ah ee miisaanka cufan ayaa culeyskiisu yahay in ka badan 19 rodol (8 kg) oo taagan ugu yaraan 15 inji (38 cm) dheer
Wax kastoo cabirkoodu yahay, inta badan Spoodles waxay u muuqdaan inay leeyihiin jaakad dhaadheer. Waxay kuxirantahay hiddo-wadaha waalidku midka badanyahay, timahoodu way noqon karaan toosan ama dabacsan u duubnaansho .
Markay tahay midabka jaakadda, Cockadoodle waxay ku imaan kartaa madow, midab, casaan (auburn ama abrikot), kareem, caddaan, lacag, ama roan. Qaar ka mid ah noocyadan isweydaarsiga ah ayaa sidoo kale leh jaakado jilicsan, bir, ama merle.
Isku-darka Poodle-Spaniel wuxuu dhaxlay astaamaha ugu wanaagsan ee waalidkood. Isu-geyntaas badankood waxay leeyihiin a deggan, dabeecad jecel taasi waxay ka dhigeysaa eyyo wehel wanaagsan leh iyo xayawaanka guryaha lagu haysto.
Waxay ku farxaan joogitaanka qoyskooda. Waxay aad u jeclaan doonaan inay waqti kula qaataan wax badan oo ay ka xanuunsan doonaan kala-go'id walaac hadaad kalidood uga tagtid mudo dheer.
Iyaga oo ruuxi leh aragtida, eeyahaani sidoo kale waxay ku fiican yihiin carruurta. Cockapoodles ayaa had iyo jeer kor u kici doona xoogaa waqtiga ciyaarta.
Laakiin sida caruusadaha kale ee eyga cabirkoodu yar yahay, milkiilayaashu waa inay ka taxaddaraan markay ka tagayaan Cockapoos aan la ilaalin carruurta yaryar. Carruurta socod baradka ah waxay noqon karaan kuwo aan caqli gal ahayn oo aan taxaddar lahayn, waxaana laga yaabaa inay ku dhammaadaan si aan ula kac ah u dhaawaceyn eeyga iyo dhinaca kale.
Isku darka Isbaanishka-Poodle wuxuu sidoo kale si wanaagsan ula dhaqmaa xayawaanka kale ee guriga ku jira, oo ay ku jiraan bisadaha iyo eeyaha kale. Kaliya waa inaad taxaddar yeelataa hareerahooda eeyaha waaweyn kuwaas oo isku dayi kara inay sheegaan xukunka.
Sidii aan soo sheegnay, noocyadan isweydaarsigu badanaa waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah iyo daryeel badan marka loo eego eeyaha kale. Baahiyahaas gaarka ah badiyaa waxay u sabab yihiin Spaniel-Poodle hybrid oo yar yar iyo jaakad qaro weyn.
Laga soo bilaabo qurxinta iyo cuntada ilaa jimicsiga iyo tababarka, halkan waa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato dayactirka saxda ah ee Cockapoo.
Wax ka qabashada baahiyaha qurxinta ee Cockapoo
Si looga hortago dhaldhalaalka iyo matting , timahaaga Spoodle waa inuu noqdaa burush ugu yaraan hal mar maalin kasta .
Cadayashada joogtada ahi waxay ka caawisaa inay ka ilaaliso jaakadisa dhalaalaysa, caafimaad qabta, iyo mid nadiif ah, taas oo muhiim ah maxaa yeelay boodhku wuxuu ku ururi karaa jaakada wuxuuna kicinayaa xasaasiyad
Maydhashada iyaga badanaa lama talin karo gaar ahaan maadaama Cockapoos aysan u nuglayn inay yeeshaan ur xun. Xaaladaha badankood, isweydaarsigani waa udgoon badan yahay. Waxay ka qaadaan astaamahan Poodle, oo caan ku ah nadaafad iyo jaakadiisa aan daadin.
Waqtiga qubeyska waa la sameyn karaa kaliya hal mar ama laba jeer bishii ama keliya markii loo baahdo. Tani waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta saliidaha dabiiciga ah taas oo ka caawinaysa inay jaakadoodu ahaato mid jilicsan. Waxaa intaa dheer, inaad si joogto ah u maydho eeygaaga ayaa qallajin kara maqaarkiisa.
Waxaad sidoo kale siin kartaa Spoodle-gaaga ugu yaraan bishiiba mar si ay u ilaaliso jaakaddiisa dherer la maareyn karo. Timaha ku hareeraysan indhahooda waa in la jarjaraa si ay si sax ah wax ugu arki karaan.
Fiiri fiidiyowgan waxtar leh ee ku saabsan sida loo jaro timaha wejiga Cockapoo:
Nadiifinta dhagaha sidoo kale waa mid aad muhiim u ah isweydaarsigan, oo leh dhego dhaadheer oo dhaadheer. Dhegaha ubaxa leh ayaa u nugul dhismayaasha qoyaan iyo wax , taas oo iyaduna dhiirrigelisa isku-ururinta bakteeriyada waxayna kordhisaa suurtagalnimada infekshan.
Haddii aad aragto in Cockapoogu uu ruxayo madaxiisa marar badan ama uu sii xoqayo dhagihiisa, waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii wax lagu dhugi lahaa gudaha dhegahooda.
Hubso inaad hubiso oo aad nadiifiso dhagahooda si tartiib ah ugu yaraan toddobaadkii hal mar , adoo adeegsanaya suufka suufka iyo xalka nadiifinta xoolaha ee lagu taliyey.
Dhegaha marka laga reebo, ilkaha eygaaga sidoo kale waa inay ahaadaan nadiifiyey ugu yaraan hal mar maalintii. Cadayashada ilkaha eygaaga ayaa si joogto ah u ilaaliya godadka iyo infekshannada isla markaana hubiya neefta cusub.
Daryeelka ilkaha ayaa si gaar ah muhiim ugu ah Teacup iyo Toy Cockapoos. Kuwa ay afka yar ka dhig kuwo u nugul dhibaatooyinka ilkaha.
Ugu dambeyntii, waa inaad jar ciddiyaha ugu yaraan bishiiba mar . Eyda qaarkood uma baahna jarista cidiyaha badan sababta oo ah ciddiyaha ayaa ka daalaya iyagoo ku ordaya dhul qallafsan, laakiin taasi maahan kiiska Spoodle, oo badanaa ah eeyga gudaha.
Ciddiyaha jarista ciddiyaha ayaa khatar noqon karta haddii aad sameyso oo aadan khibrad u lahayn, marka waligaa ha ka waaban inaad weydiisato dhakhtarkaaga xoolaha ama kaaliyahaaga hagaajinta.
Miyuu Cockapoos runtii hypoallergenic yahay?
Sida Doodle-yada badankood, isku darka Poodle-Spaniel ayaa badanaa lagu tilmaamaa inuu yahay eeyga hypoallergenic. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay inay jirto ma jiro nooc dhab ahaan ah 100% hypoallergenic .
Isku-darka Cocker Spaniel-Poodle waxay leeyihiin jaakado daadsan xaddi yar oo dhogor iyo dandar ah, ama unugyada maqaarka ee dhintay. Dhogorta ay daadiyeen ayaa lagu qabtaa timahooda timahooda halkii ay dul sabeyn lahaayeen deegaanka.
Iyaga oo leh jaakadooda hoos u daadinta, noocyadan iskutallaabta ahi waa u yar tahay inuu kiciyo xasaasiyadda waana xayawaanka ugu habboon ee loogu talagalay kuwa xasaasiyadda qaba .
Cunto ku habboon Cockapoo
Hubso inaad quudiso Spoodle-kaaga premium kibble qalalan loo sameeyay noocyo yaryar - Kibblekan badiyaa cabirkiisu wuu yaryahay si loo fududeeyo cunistiisa. Cuncunka qalalan ee cunnada ayaa waliba ka caawin doona nadiifinta dusha sare ee ilkihiisa.
Dhiiga Poodle ee Cockapoo sidoo kale wuxuu u dhigaa mid u nugul xasaasiyadda cuntada . Midhaha sida galleyda iyo qamadiga ayaa kicin kara xasaasiyaddan, sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad weydiiso dhakhtarkaaga xoolaha ee ku saabsan dhigista eygaaga a cuntada aan hadhuudhka lahayn .
Haddii aad ogaatid in eeygaagu uu yahay cun cun cun, waxaad isaga ku bilaabi kartaa BARF (cuntooyin cayriin oo bayooloji ah). Cunnadan, eygaaga ayaa wax cunaya lafo cayriin iyo hilib oo ay weheliyaan miraha cagaaran iyo khudradda sida berry iyo broccoli.
Immisa cunto ah ayaa Cockapoo u baahan yahay?
Iskudarka dadka waaweyn ee Isbaanishka iyo Poodle waa in la quudiyo ½ ilaa 1 koob oo ah cuntada eeyga qalalan maalin kasta, u kala bax laba cunto.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad tixgelisaa cabirkeeda iyo heerarkeeda waxqabad markaad go'aansanayso inta aad ku quudinayso Cockapoo.
Marka la fiiriyo cabirkooda, noocyadan iskutallaabta ahi waxay u baahan karaan cunno yar laakiin way u baahan doonaan kalooriyo badan halkii rodol ee miisaanka jirka si loo joogteeyo dheef-shiid kiimikaad.
In kasta oo ay u baahan yihiin kalooriyaal, in kastoo, iska ilaali xad dhaafid Cockadoodle. Sida dhammaan eeyaha yaryar, waxay u nugul tahay cayilnaan , gaar ahaan maadaama aysan u firfircooneyn sida noocyada kale.
Waa inaad awood u leedahay inaad si muuqata u aragto dhexda marka aad eeyahaaga hoos u eegto. Feerihiisa sidoo kale waa inay ahaadaan kuwo sahlan in la dareemo (laakiin aan la arkin) dhogorta hoosteeda.
Jimicsiga Cockapoo wuu u baahan yahay
Qeyb ka mid ah daryeelka saxda ah ee 'Cockadoodle' ayaa siineysa jimicsiga ay u baahan tahay. Jimicsiga joogtada ahi wuxuu hubiyaa in eeygaagu helo ku filan kicinta jirka iyo maskaxda . Intaas waxaa sii dheer, waqtiga ciyaarta wuxuu xoojiyaa xiriirka ka dhexeeya adiga iyo xayawaankaaga.
Warka fiicani waa in Cockapoos ay leeyihiin oo keliya heerarka tamarta dhexdhexaadka ah . Socod maalinle ah oo waara ugu yaraan 15 daqiiqo waa jimicsi ku filan isweydaarsigan, gaar ahaan noocyada kala duwan ee Teacup iyo Toy.
Mini iyo Standard Spoodles ayaa laga yaabaa inay ku raaxaystaan ​​jimicsi xoogaa xoog badan, sida dabaalan oo soo doon . Ciyaaraha la soo ceshano waa hab wanaagsan oo eygaagu u dhaqaaqo oo maskaxdiisa u yeesho mid fiiqan, gaar ahaan marka la eego dhaxalka ugaarsiga.
Spoodles ka waaweyni sidoo kale way ku raaxaysan karaan tababarka dhaqdhaqaaqa iyo ciyaaraha kale ee canine. Eygaaga ayaa ku raaxeysan doona tababbarka howlahan ma ahan kaliya kicinta maskaxda laakiin sidoo kale waqtiga uu kula qaadanayo.
Xitaa ciyaaraha fudud ee gudaha sida ugaarsiga khasnadda ayaa sii hayn doona iskutallaabtaada Isbaanish-Poodle iyo sii daa tamarta p-up-ka ah , ka hortagga u janjeedha wax halaagga.
Cockapoos ma fudud yihiin in la tababaro?
Thanks to hiddahooda Poodle, eeyahaas badankood waa neecaw ay tababaraan.
Taariikhda waalidkood ee asxaabta ugaarsiga ayaa sidoo kale si dabiici ah u sameeya isweydaarsigan u janjeera in loo hoggaansamo amarrada .
Tababbarku wuxuu ugu waxtar badan yahay marka eeygaagu eey yahay. Ku bilow barida dhaqanka saxda ah isla marka aad guriga gayso.
Tababarro gaagaaban laakiin soo noqnoqda ayaa kaa caawin doonta ka-joojinta ilmahaaga inuu caajiso ama mashquuliyo.
Sida eyda badankood, xoojinta wanaagsan shaqeeyaa yaabab leh isku darka Poodle-Cocker. Kaydso dawooyinka sida xabadaha digaagga la kariyey ama beerka oo hubi inaad ku ammaanaan eygaaga mar kasta oo uu raaco amar.
Bulsheynta ayaa muhiim u ah tababarka eygaaga. Marka ardaygaagu helo tallaalada , waad u qaadan kartaa jardiinada eyga si aad ula qabsato inuu la joogo xayawaanka kale.
Leash-tababarka sidoo kale waxay kaa caawin doontaa inaad xakamayso isku darkaaga 'Cocker Spaniel-Poodle hybrid' marka uu doonayo inuu kaa hor maro oo uu eryo xayawaanka yaryar. Waxaad ku bari kartaa eygaaga inuu ku raaxeysto qoorta inta uu weli yar yahay.
Dhibaatooyinka habdhaqanka ee Cockapoos
Noocyadan isweydaarsiga ah waa eeyo wehel ah oo jecel inay waqti la qaataan qoysaskooda. Tani waa sababta Spoodles badani u dhibaatoodaan kala-go'id walaac , taas oo inta badan keenta dabeecad burburin iyo ciin xad dhaaf ah.
Tababbarka sanduuqa waa hab wanaagsan oo lagu hubiyo in eeygaagu deggan yahay haddii aad ka baxdo guriga saacado yar. Sanduuqa ayaa siiya Spoodle meel aamin ah oo uu ku nasan karo.
Waxaad sidoo kale uga tagi kartaa eygaaga oo leh alaabta lagu ciyaaro iyo daaweyn qaarkood si ay mashquul ugu noqoto intaad maqantahay. Sidan, kuma imaan doontid guriga si loo burburiyo roogaga ama barkimada sariirta, deriskaaguna kama caban doonaan buuqa.
Cockapoo ma ku noolaan karaa banaanka?
Sida farcanka Cocker Spaniels iyo Poodles, kuwaas oo asal ahaan ah labada eey eeyaha ugu fiican adduunka, Cockapoos waxay sida ugu fiican u koraan marka ay nool yihiin gudaha .
Iyagu waa eeyaha ugu fiican ee loogu talagalay dadka deggan guryaha sababtoo ah cabirkooda. Waxay sidoo kale jecel inay u dhowaadaan dadkooda waxayna u nugul yahiin kala-tagga walwalka, sidaa darteed iyagu way ugu faraxsan yihiin markay dhinac ka joogaan.
Iyaga oo ku noolaada daaradda guriga ayaan lagula talin karin. Eeyahaani yar yar kuma baxsan doonaan banaanka, marka hubso inaad soo qaadato dhamaadka maalinta.
Waxay sameeyaan, si kastaba ha noqotee, waxay jecel yihiin inay banaanka ku joogaan waqtiga ciyaarta. Markaad banaanka ku baashaalaysid xilliga kulul, hubi inaad Eygaaga qoyaan biyo macaan.
Inta lagu jiro bilaha qabow, waa loo ogolaan karaa inay ku ciyaaraan barafka, sidoo kale. Kaliya xusuusnow inaad ka saarto barafka ku dhegsan cagaha iyo caloosha. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho a funaanad ama jaakad si looga ilaaliyo dhaxanta.
Cockapoo wuxuu leeyahay celcelis cimri ahaan 14 ilaa 18 sano , taas oo ah nolosha caadiga ah ee eyda yaryar badankood.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in iskudhafyadani ay sidoo kale u nugul yihiin dhibaatooyinka caafimaad ee sida caadiga ah ku dhaca waalidkeed. Baadhitaanka caafimaadka hore waxay kaa caawin kartaa go'aaminta suurtagalnimada cuduradan ku jira Coupkapup pups.
Waa kuwan qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad Poodles iyo Cocker Spaniels waxay u nugul yihiin:
Tani xaaladda indhaha waxay siineysaa indhaha eeyga muuqaal daruur leh, oo saameyn ku yeelanaya aragtida. Waxaa lagu daaweyn karaa qalliin iyo qaddarka saxda ah ee daawada si loo hagaajiyo aragga aragga eeygaaga.
Tani waa dhibaato jilibka ah oo ku badan Cockapoos iyo eyda yaryar ee kale. Haddii isweydaarsigaagu uu ka cabanayo isbeddello jilicsan, waxaa laga yaabaa inuu dareemo xanuun ka soo baxa jilbaha jilbaha oo kala baxa.
Xaaladani waxay dhacdaa marka miskaha aysan gaarin horumar buuxa. Hip dysplasia waxay sababi kartaa dhaqdhaqaaq xanuun badan oo lugaha dambe.
Sidii aan horey u soo sheegnay, Cockapoos waxay yeelan karaan xasaasiyad, sidoo kale, sida waalidkood Poodle. Qubeyska iyo miraha isdaba jooga ah ayaa ah waxyaabaha kiciya xasaasiyadda eeyaha ey isku dhafan yihiin.
Cocker Spaniels ayaa la sheegay inay si aad ah u saameeyaan xaaladaha beerka sida 'portosystemic shunt', 'hepatitis', iyo cirrhosis. Spoodle-kaaga ayaa laga dhaxli karaa saadaal arrimahaan beerka ku saabsan.
Spoodles waxay u nugul yihiin infekshinka dhegaha sababo la xiriira dhagahooda. Hubso inaad si joogto ah uga hubiso dhegaha eygaaga caarada ama qoyaanka xad dhaafka ah.
P Atrophy xasaasi ah oo qallafsan (EE)
Tani waa xaalad la iska dhaxlo oo eeydu si tartiib tartiib ah u lumiyaan aragtidooda sababtoo ah xumaanshaha qaybta dambe ee isha.
Tallaabada ugu horreysa ee wax looga qabanayo arrimahan caafimaad ee suurtagalka ah waa inaad haysato Puple-Spaniel pup baaritaanka caafimaadka sida ugu dhaqsaha badan. Fikrad ahaan, soosaarahu wuxuu ahaa inuu eeyku ka baaro xaaladaha hidda-socodka ka hor inta uusan u sii deyn daryeelkaaga.
Bixiyeyaashu waa inay awoodaan inay ku tusaan nadiifinta caafimaadka mid ka mid ah hay'adaha soo socda:
Aasaaska Orthopedic ee xayawaanka (OFA) - dhibaatooyinka wadajirka ah eeygaaga, sida sinta dysplasia iyo xusulka dysplasia. Aasaaskaani wuxuu kaloo bixiyaa baaritaano ku saabsan hypothyroidism iyo cudurka von Willebrand.
Jaamacadda Auburn - loogu talagalay thrombopathia , taas oo ah cillad platelet la iska dhaxlo oo xinjirowga dhiiggu uu ku dhowaadaba aan macquul ahayn ama ku dhaco xawaare aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn.
Aasaaska Canine Eye Foundation (CERF) - si loo caddeeyo in eygaaga indhihiisu caadi yihiin.
Sidoo kale waa inaad maskaxda ku haysaa in da'da waalidkeed ay saameyn ku yeelan karto caafimaadka guud ee eeyahaaga.
Ha taageerin soosaarayaasha eyda ku dhalaa 2 sano jir ama kayar . Inta badan cudurada laga helo eeyaha ma soo baxaan ilaa ay ka gaadhaan markay gaadhaan 2 ama 3 sano jir.
Ka warran xoogga isku dhafan?
Marka ay timaado isdhaafsiga jirka, ereyga ‘ xoog isku dhafan '(Ama' heterosis 'haddii aad rabto inaad cilmi ka hesho) inta badan waa la tuuraa. Fikradan waxaa loola jeedaa tayada la hagaajiyay ee astaamaha ey iskudhafan iyo guud ahaan caafimaadka sababo la xiriira habka taranka.
Bixiyeyaal badan ayaa adeegsada firfircoonaanta isku dhafka ah iyada oo qayb ka ah garoonka iibka marka ay dadka ku dhiirrigelinayaan in ay helaan eey naqshadeeye ah halkii ey ey saafi ah yihiin. Tani waxay dhalisay fikrad khaldan oo ah in dhammaan noocyada isweydaarsiga ay ku raaxaystaan ​​caafimaad wanaagsan.
Runtu waxay tahay in haddii dhaxalka hidde-wadaha ee eeydu uu ahaado mid isku mid ah waqtiga, the jiilalka soo socdaa ma yeelan doonaan awood isku mid ah mar dambe. Waxay uun ku dhammaan lahaa cudurada ku dhaca kaligood.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad barato eeyo kale oo naqshadeeyayaal ah oo ka tirsan qoyska Doodle.
Waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareerto qaar ka mid ah sida Spoodle maxaa yeelay isweydaarsiyadahan waxay wadaagaan waxyaabo isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, mid kasta oo ka mid ah iskudhafyadaani waxay leeyihiin astaamo u gaar ah.
Cockapoo iyo Cavapoo
Cavapoo ( xigasho )
The Cavapoo waa iskudhaf ah Cavalier King Charles Spaniel iyo Poodle.
Sida Cockadoodle, Cavapoo wuxuu ku yimaadaa cabirro kala duwan, iyadoo kuxiran cabbirka waalidkiis Poodle.
Labada eyba waxay leeyihiin jaakadaha hoos u daadinta , laakiin, labadan Doodle waxay ku kala duwan yihiin markay u ekaato muuqaalkooda.
Cavapoo badanaa wuxuu u baahan yahay dayactir yar , maadaama aysan timahoodu u baahnayn in la cadaadiyo sida badan.
Spoodle iyo Cavapoo labaduba waxay leeyihiin hal lakab, jaakado dhaadheer (midkoodna si dabacsan u duuban ama toosan). Si kastaba ha noqotee, timaha isku dhafan ee Spaniel-Poodle badanaa wuxuu ku koraa si xowli ah , sidaa darteed waxay u baahan doonaan booqashooyin dheeri ah oo ku saabsan caruusadda.
Labada noocba waa kuwo caqli badan, sababtoo ah waalidkood Poodle. Laakiin markay tahay tababarka, Cavapoo aad ayey uga fududdahay la macaamilkiisa iskutallaabta Poodle-Cocker.
Cavapoos waxay u muuqdaan kuwo feejigan oo feejignaan leh, laakiin ma helaan hammi ay ku ciyaaraan inta badan. Diiradooda iyo caqligooda ayaa ka dhigaya inay ku fiicnaadaan tababarka.
Shakhsiyaadka isku dhafan ee loo yaqaan 'Cavalier-Poodle' shakhsiyan isku dhex jira ayaa inta badan qabow badan. Waxay leeyihiin heerar tamar dhexdhexaad ah, waxayna ku faraxsanaan lahaayeen inay kaliya maalintii oo dhan la seexdaan oo ay la seexdaan bini'aadamka.
Cockapoo iyo Maltipoo
Maltipoo ( xigasho )
The Maltipoo sidoo kale waa mid ka mid ah eeyaha dadku ku jahwareeraan isku darka 'Poodle' iyo 'Spaniel'.
Maltipoo waa faracyada qalafsan ee Maltese iyo iyo Poodle.
Isboortiga Cocker Spaniels guud ahaan way ka weyn yihiin Malteses sidaa darteed, badanaa, isku darka Spaniel-Poodle waa ka weyn marka la barbar dhigo iskutallaabooyinka Maltese-Poodle.
Ma jirto wax damaanad qaad ah oo tan, in kastoo, maxaa yeelay waxay mararka qaarkood ku xirnaan doontaa cabirka Poodle-ka ay ka soo degaan.
Labada nooc ee isku dhafan ayaa ah caqli badan, kalgacal leh, oo daacad ah in ay aadanuhu.
Cockapoos iyo Maltipoos waxay u janjeeraan inay ku dhegaan qoyskooda, sidaa darteed waxay la kulmaan walaac kala tag ah markasta oo keligood la daayo muddo dheer.
Haddii aad rabto inaad ogaato midka u roon xayawaan ahaan, jawaabtayada daacadda ahi waa inaadan khaldami doonin midkoodna.
Labada Doodleba waa eeyo yar yar oo si hoose u daadinaya oo ciyaar iyo jacayl leh. Waxay sameyn doonaan xayawaanka qoyska iyo asxaabta wanaagsan.
Cockapoo iyo Goldendoodle
Isku darka Goldendoodle waa mid iskutallaab ah Soo Celinta Dahabiga ah iyo Poodles. Goldendoodles si fudud ayaa looga sooci karaa iskudhafka 'Poodle' iyo 'Spaniel' iyadoo loo marayo cabbirkooda - jiritaankii hore ka dheer oo caato ah ka dambeeya.
Sababtoo ah hiddo-wadayaasha Poodle waxay u muuqdaan inay xoogaa ka xoog yar yihiin Doodles, labada nooc ee isweydaarsiga waxay leeyihiin Poodle oo qalafsan, si dabacsan loo duubay, jaakado hal-lakab ah. Waxay ku imaan karaan midabo kareem, bunni, madow, ama isku dar ah labo ama seddex midab.
Goldendoodles waa hypoallergenic , sidoo kale, sida Cockapoos.
Goldendoodles waa eeyo saaxiibtinimo leh, aad ugu eg Golden Retriever. Qaar ka mid ahi xitaa ma ciyi doonaan shisheeyaha ku soo dhowaanaya. Waxay ku soo dhaweynayaan qof walba dabeecaddiisa diirran iyo dabacsan.
Waxay kala yihiin xiiso leh iyo ciyaar, sidoo kale. Waxay sameystaan ​​eey qoys oo aad u wanaagsan maadaama isweydaarsiyadaani ay si wanaagsan ula socdaan xitaa carruurta.
Isku-darka Poodle-Spaniel, dhanka kale, wuu yara yaraan karaa xasaasi ah ama dhuleed hareeraha dadka aysan aqoon. Isku-darka yaryar ee yaryar ayaa doonaya in badan oo ka mid ah dareenkaaga oo laga yaabo inaysan ku faraxsanayn inay la wadaagaan qof kale.
KU breeder sumcad leh waxay noqon laheyd shayga ugu fiican ee aad ku heli karto cunug yar oo Cockapoo ah oo caafimaad qaba. Kaliya ha raacin breed-kii ugu horreeyay ee aad ku aragto khadka tooska ah, in kastoo.
Sababtoo ah caan ka mid ah eeyaha naqshadeeye sida iskudhafka 'Cocker Spaniel-Poodle', ayaa kuwa badan oo khudaarta ahi ay u jeedaan dhaqamada anshaxa ka baxsan kaliya si aad u sameyso lacag deg deg ah.
Hubso inaad raacdo abuure ka jawaabi kara dhammaan su'aalahaaga ku saabsan cunugga iyo waalidkiis, gaar ahaan markay tahay caafimaadka. Bixiyaha saxda ah sidoo kale wax dhibaato ah kuma lahan inuu kuu oggolaado inaad booqato xeryahiisa si aad u awooddo ilaali eey iyo dabeecaddeeda intaadan geyn guriga.
Celceliska qiimaha Cockapoo waa qiyaastii $ 1,100 ilaa $ 2,000 .
Kuwani Cockapoo soosaarayaasha ah waxay ku qoran yihiin Websaydhka Naadiga Cockapoo ee Mareykanka oo ah xubin ka mid ah breed, taas oo macnaheedu yahay inay ku xiran yihiin Xeerka Anshaxa ee CCA Breeder.
Cockapoos lamadegaanka Sare (Kaalifoorniya)
Cockapoos-ka Cathy (Florida)
Cockapoos sonkor iyo xawaash (Koonfurta Carolina)
Samatabbixinta ama korsashada Cockapoo
Qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha xayawaanku ma qaataan wakhti ay ku bartaan baahiyaha aasaasiga ah ee eydooda. Natiijo ahaan, in badan oo xayawaanadan ka mid ah waxay u badan tahay inay ku dambeeyaan hoyga ama xarumaha badbaadinta .
Hadaadan dan kahayn inaad guriga qaadato an eyga ka weyn , maxaa u diiday in la korsado qof weyn oo Cockadoodle ah halkii? Waa wax aad uga qaalisan, iyadoo khidmada korsashada ay ku kacayso celcelis ahaan $ 300.
Kaliya ma awoodi doontid inaad lacag dhigato helitaanka eey , laakiin sidoo kale waxaad siin laheyd nooc isweydaarsi ah oo laga tagay guri jacayl leh.
Fiiri ururadan samatabbixinta haddii aad xiisaynayso qaadashada Cockapoo:
Samatabbixinta Poodle Carolina
Spoodles waxay u baahan yihiin a milkiilaha masuulka ka ah yaa siin kara dareenka gaarka ah ee ay u baahan yihiin.
Waxay leeyihiin jaakado dhaadheer oo u baahan qurxinta maalin kasta iyo hay'ado yaryar oo u baahan qabashada jilicsan.
Si loola macaamilo dabeecaddeeda dayactirka sare, in kastoo, Spoodle wuxuu kugu abaalmarin doonaa daacadnimo iyo wehelnimo.
Cockapoos waxay leeyihiin a jecel, shaqsiyad ciyaar leh taasi waxay ka dhigeysaa iyaga xayawaan wanaagsan ha ahaadeen kuwa kali ah ama qoysaska.
Cockapoo sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada isweydaarsiga ugu caqliga badan ee aad la kulmi doonto, sidaa darteed iyaga tababar xoojinta wanaagsan fududaan doonto.
Haddii aad tahay milkiile sharaf leh oo ah iskudhafka 'Cocker Spaniel-Poodle', nala wadaag khibradahaaga! Ka tag faallo hoose!
Maxay Eydu U Quustaan? Sayniska gadaashiisa Eyda
Kobaca Dahabka Kobaca iyo Shaxda Miisaanka (Lab & Dheddig) - Tilmaamaha oo Dhameystiran
u dhisida sanduuqa cawska eey taranka weyn
waa maxay husky mini
rottweiler iyo jarmal shepard isku darka
shaybaadhka dib u soo celinta dahabka isku dhafka ah
jarmal adhijir tan iyo madow